Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Hawaii Tourism Authority na-akpọsa ndị otu ọhụrụ nke ndị isi oche ya
Hawaii Tourism Authority na-akpọsa ndị otu ọhụrụ nke ndị isi oche ya
Gọvanọ David Ige wepụtara mmadụ atọ na nso nso a ka ha jee ozi na kọmitii HTA, na ndị Senate State Hawaii kwadoro nhọpụta ha tupu taa
Hawaii Tourism Authority na-anabata Dylan Ching ije ozi na ndị isi oche ya
Hawaii Tourism Authority na-anabata Keith “Keone” Downing iji jee ozi na ndị isi nchịkwa ya
Hawaii Tourism Authority nabatara Sigmund "Sig" Zane ka ọ bụrụ onye isi na ndị isi oche ya
The Hawaii Tourism Authority (HTA) nwere obi ụtọ ịnabata ndị a họpụtara ọhụrụ atọ ka ha jeere ya Board of Directors - Oahu na Kauai restaurateur Dylan Ching; ọkachamara mmiri mmiri, gburugburu ebe obibi na sọfụ nwe nwe Keith “Keone” Downing; na onye ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama, Sigmund "Sig" Zane nke Hawaii Island.
Gọvanọ David Ige n’oge na-adịbeghị anya họpụtara mmadụ atọ ahụ ka ha jee ozi na ụlọ ọrụ HTA, na ndị Senate State Hawaii kwadoro nhọpụta ha n’oge taa. Usoro ha dị irè ozugbo.
“The HTA Board of Directors bụ iche iche, ike, ọhụụ na pụrụ iche ruru eru iji mezuo ya fiduciary ibu ọrụ na-eduzi HTA, dị ka anyị na steeti na-eduga njem gị n'ụlọnga. N'ụtụtụ a, achọpụtara m na ndị isi ụlọ ọrụ anyị atọ, Sig, Keone, na Dylan, ndị m na-asọpụrụ ma nabata, bụ ndị ọchụnta ego zuru oke na ndị na-anụ ọkụ n'obi - njikọta nke gosipụtara nguzozi anyị na-achọ na HTA, n'etiti obodo, ọdịbendị , na azụmahịa. Malama pono, ”ka John De Fries, HTA president na CEO kwuru.
Onye na-elekọta ndị ọbịa n'oge gara aga nwere ihe karịrị afọ 25, Dylan Ching bụ osote onye isi ọrụ maka TS Restaurants, nke gụnyere Duke's Waikiki na Hula Grill Waikiki na Oahu, na Keoki's Paradise na Poipu na Duke's Kauai na Ogige Ubi. Ching na-eje ozi ugbu a dị ka onye isi otu maka otu dị iche iche, dịka Waikiki Community Center, Waikiki Beach Special Improvement District Association, Waikiki Business Improvement District, na Bishop Museum Association Council. Onye gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Kamehameha, Ching natara akara ugo mmụta bachelor nke Arts na Mahadum San Diego.
Keith “Keone” Downing bụ ọkachamara mmiri na ọrụ nke Downing Hawaii, Hawaii kasị ochie sọfụ shop. Amụrụ ma zụlite na Honolulu, Keone bụ nwa onye ọsụ ụzọ nnukwu ebili mmiri George Downing, onye ọsụ ụzọ, onye asọmpi, onye nchịkwa, nwa akwụkwọ, onye ọhụụ, na otu n'ime ụmụ nwoke Waikiki Beach Boys nke Duke Kahanamoku gụrụ. Keone bụ onye isi na-ahụ maka Surlọ Ọrụ Mmụta Na-enweghị Mmasị, nke a makwaara dị ka Save Our Surf, bụ nke a raara nye ya maka nchekwa nke oké osimiri Hawaii, coral reef, ebili mmiri na osimiri. Keone gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Kamehameha na California School of Arts and Crafts.